LibreOffice Base keessatti, faayilii kuusdeetaa keessatti dhanga'ii adda addaatiin kuufamaniif deetaa argachuu ni dandeenya. LibreOffice Base dhanga'ii faayilii baakkuu kuusdeetaa tokko ni gargaara, kan akka dhangii dBASE. Kuusdeetaa alaantotti walquunaamsiisuuf LibreOffice Base fayyadamuu dandeessa, kan akka kuusdeetaa MySQL ykn Oraakilii irraa.
Akaakuuwwan kuusdeetaa kanaa gadii LibreOffice Base keessatti akaakuu dubbiqofaa dha. LibreOffice Base keessaa caasaa kuusdeetaa jijjiiruun ykn gulaaluun, galchuun, fi galmeewwan kuusdeetaa gosoota kuusdeetaa kanaaf haquun hin danda'amu:
Deetaa yaadannoo teessoo
Kuusdeetaa LibreOffice jiru fayyadamuun
Faayila kuusdeetaa haaraa uumuuf, Faayila - Haaraa - Kuusdeetaa filadhu.
Masakaan Kuusdeetaafaayila kuusdeeta uumuu fi kuusdeetaa haaraa LibreOffice keessatti galmeessuuf si fayyada.
Faayilli kuusdeetaa gaafatoota, gabaasawwan, fi unkaalee kuusdeetaaf akkasumas iddoo galmeen itti kuufame kuusdeetaan walitti hidhuuf. Dhangeeessuunis faayila kuusdeetaa keessatti kuufama.
Faayila kuusdeetaa banuuf, Faayila - Banifiladhu. Saanduqa tarree Gosa faayilaakeessatti, "Galmeewwan kuusdeetaa" qofa mul'isuuf filadhu. Galmee kuusdeetaa filadhuu Banijedhu filadhu.
Kuusdeetaa Galmeessuu fi Haquu
Kuusdeetaa Haaraa Uumuu
Bu'ura keessaa Deetaa Alaaguu fi Alerguu
Furtuuwwan Qaxxaamuraa Kuusaa Deetaa